Tag: Fiidiyowyada Suuqgeynta | Martech Zone
Tag: Videos Suuq
Fiidiyowgu waa hal meel oo aan runtii isku dayayo inaan kor u qaado sanadkan. Dhawaan waxaan la sameeyay Podcast Owen oo ka socda Iskuulka Suuqgeynta Fiidiyowga wuxuuna igu dhiirrigaliyay inaan sameeyo xoogaa dadaal dheeri ah. Waxaan dhawaan nadiifiyay kanaalkeyga Youtube - shaqsi ahaan iyo shaqsi ahaanba Martech Zone (fadlan rukumo!) Aniguna waxaan sii wadi doonaa inaan ka shaqeeyo sidii loo heli lahaa fiidiyowyo wanaagsan oo la duubay iyo sidoo kale inaan sameeyo fiidiyowga waqtiga dhabta ah. Waan dhisay
Khamiista, Diseembar 24, 2020 Saturday, April 10, 2021 Douglas Karr
B-duub, muuqaallada saamiyada, muuqaalka wararka, muusikada, fiidiyowyada asalka ah, kala-guurka, jaantusyada, jaantusyada 3D, 3D-yada fiidiyowga ah, tusaalooyinka fiidiyowga ee fiidiyowga ah, saamaynta dhawaaqa, saamaynta fiidiyowga, iyo xitaa fiidiyowyada fiidiyowga ee buuxa ee fiidiyowgaaga soo socda ayaa laga iibsan karaa khadka tooska ah. Maaddaama aad raadineyso inaad hagaajiso horumarkaaga fiidiyowga, xirmooyinkaani waxay run ahaantii dardargelin karaan wax soo saarkaaga fiidiyowga waxayna ka dhigi karaan fiidiyowyadaadu inay u muuqdaan kuwo aad u xirfad badan qayb ka mid ah waqtiga. Haddii aad aqoon u leedahay farsamada casriga ah, waxaad xitaa rabi kartaa inaad quusato